Ngwunye Mmemme Ntanetị Gị Online. Ndị asọmpi ọhụrụ - 3 Atụmatụ dị egwu site na nkwụsị
Ịmepe ụlọ ahịa dị n'ịntanetị bụ ọrụ dị mfe. Imepe ụlọ ahịa anụ ahụ nwere ike ịbụnsogbu siri ike. Ọ na-agụnye usoro dịka nchekwa nchekwa ngwaahịa, na-enye iwu ịzụta shelves ma na-akwụ ụgwọ maka ebe a na-ere ahịa. Otú ọ dị,nke a abughi ikpe maka e-azụmahịa - diseno web uruguay. Onye ọ bụla nke nwere ihe ọmụma dị mfe dị mfe nwere ike ịmepụta mmalite ma mee ezigbo ego site naihe omuma ihe di omimi.
N'iji ihe omuma a mara, o doro anya na mmalite ọ bụla nke azụmahịana ugbua nwere ike iguzogide uzo siri ike site n 'mmalite mmalite ntanetị. Ọtụtụ n'ime ndị omempụ ọhụrụ ahụ na-etinye ego dị ukwuu na SEO ma kwụọ ụgwọ mgbasa ozinweta òkè n'ahịa na onye niche.
Business e-commerce nke nwere ogige nke nwere ogologo oge pụrụ ịsọ mpi na mmalite dị otú ahụ,na-agbaso ndụmọdụ ndị Nik Chaykovskiy nyere, bụ Senior Customer Success Manager nke Ọcha .
1. Jiri usoro ahia ahia.
Ụzọ ahịa ahịa omenala gụnyere mgbasa ozi ọkọlọtọ, mgbasa ozi PPC, na ọbụna ngwaahịanbanye na ụlọ ahịa na-aga nke ọma dịka Amazon na eBay. Otú ọ dị, nnukwu ụlọ ọrụ na-eji usoro okike dịka ndị na-akwụ ụgwọ ụgwọ. Dị ka ọmụmaatụ,ụlọ ọrụ nwere ike ịtọ egwu, ebe ha na-akpọ onye ahịa ka ọ bịa. N'ime òkè a, onye ahịa nwere ike ịhọrọonye ọzọ maka ego. Ntugharị ndị dị otú a na-eduga ahịa karịa ụgwọ PPC akwụ ụgwọ.
Usoro ahia ahia dị ka vidiyo nkuzi iji gbaa ndị ahịa dị ugbu a ume..Social media marketing na email na-esonụ ike na-ekere òkè. Ikekọrịta dị mma maka SEO nakwa ịnweta ndị ahịa ziri ezi. N'ọtụtụ ọnọdụ, ndị mmadụịkekọrịta ọdịnaya nye ndị na-aghọ ndị ahịa n'otu ntabi anya.
2. Nye Ahịa Ahịa Ahịa.
Inye onyinye ahịa ndị ahịa kachasị elu abụghị kpọmkwem maka ndị asọmpi ọhụrụ. Dị ka onye na-ere ahịaonye nọ na azụmahịa ruo ogologo oge, nke a bụ ubi ebe ahụmahụ gị na-arụ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, onye nwere ohere inye ndị ahịaahụmahụ ndị ahịa na-enweghị atụ. N'ọnọdụ ụfọdụ, ị nwere ike ịrịọ onye ahịa ahụ ka ọ dị na mgbasa ozi ọha ma ọ bụ ọbụna nyochaa na Google. Stellarndị ahịa nwere ike ịmalite ịmatakwu ụmụazụ ha ma mee ka ị bụrụ ndị ọbịa ọhụrụ.
3. Nye Onyenye Enyemaka.
N'ọtụtụ ọnọdụ, ndị ahịa na-aga asọmpi ọhụrụ bụ ndị ahịa gị ochie. SEOgụnyere ịgụkọrịta olu ọchụchọ ka ọ ghara ịbịakwute ndị nyocha. N'ihi nke a, ịchọrọ ịchọta ụzọ iji nwetaghachi ihe ndabere nke ndị ahịa gị.Mgbasa ozi email na-emechi anya nwere ike ịbụ ezigbo atụmatụ. Onye nwere ike ịmalite site n'ịkele ndị ahịa mbụ na inye onyinye na ọnụ ala.N'ọnọdụ ụfọdụ, gụnyere onyinye n'efu maka ihe ha zụrụ. Ozugbo i meriri ndị ahịa gị, ị nwere ike ịlaghachi usoro ahịa ahịa ndị okenye.
Ọtụtụ ndị ọchụnta ego, ndị na-arụ ọrụ azụmahịa n'ịntanetị, na-eche asọmpi siri ike ihusite na mmalite. Ndị mmadụ na-aga ahịa ahịa n'ịntanetị dịka tonnes nke usoro SEO nakwa dị ka mgbe onye mmeri ọhụrụ na-egbuke egbuke na-egosi na ọnọdụ ahụ,e nwere mkpọda nke okporo ụzọ na-abịa na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ihe a na-eme ka usoro SEO dum daa dị ka onye asọmpinwere oke n'usoro SERP, inweta òkè nke ahia gị. Otú ọ dị, mmadụ nwere ike ịlaghachi ahịa ahụ na mbụ, ya mere asọmpi nwere ikekwadoro. Site na ndụmọdụ ndị dị n'elu, ị nwere ike imeri ndị ahịa gị ma nwetaghachi ọnọdụ gị.